डिनरमा रोटी-तरकारी किन खानु हुँदैन ? « Salleri Khabar
डिनरमा रोटी-तरकारी किन खानु हुँदैन ?
नेपालको तराई तथा शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरहरुमा रातिको खानामा रोटी-तरकारी खाने प्रचलन रहेको छ । तरकारीहरु सधैं नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छन् र रोटी पनि फाइबरले भरिपूर्ण हुन्छ । तर, डिनर अर्थात रातिको खानमा रोटी-सब्जी खानाले तपाईंको तथा तपाईंको परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन ।
अधिकांश व्यक्तिहरु रातिको खानापछि धेर-थोर काम गर्छन् र त्यसपछि सुत्न जान्छन् । त्यस्तो बेला हाई काब्र्स भएका आहारहरुलाई पचाउनका लागि समय नै पुग्दैन । जसबाट ती खानेहरु पच्न पाउँदैनन् । लामो समयसम्म त्यस्ता नपच्ने खानाहरु खाँदा हामीलाई विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याले घेर्छ । जसमा मोटोपना तथा मधुमेह सबैभन्दा गम्भीर समस्याहरु हुन् ।
रातिको खानामा के खादा राम्रो हुन्छ ?
हामीले रातिको खानामा हल्का तथा सुपाच्य खानेकुरा खानुपर्छ । जसलाई पेटले सजिलै पचाउन मदत गर्छ । त्यसका लागि हामीले कम्प्लेक्स कार्ब्स भएको खानेकुरा खानुपर्छ । कम्प्लेक्स कार्ब्स त्यस्तो आहारहरु हुन् । जो निकै सुस्त गतिमा पच्छ । रातिको खाना प्रायः हल्का नै हुनुपर्छ । त्यसैले शाकाहारी व्यक्तिहरुले रातिको खानामा उमालिएका तरकारीहरु, गि्रल्ड तरकारीहरु, सुप, सलाद आदि खान सक्छन् । यसबाहेक यदि तपाईंलाई धेरै भोक लागेको छ भने तपाईंले दाल, ओट्स आदि खान सक्नुहुनेछ । यदि तपाईं मांशाहारी हो भने रातिको खानामा ग्रिल्ड चिकेन अथवा माछा खान सक्नुहुनेछ ।
रातिको खानामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस्ता छन् :
-खाना खाने क्रममा खाना खाएको एक घण्टासम्म पानी पिउनु हुँदैन ।
-सुत्नुभन्दा २-३ घण्टा पहिला नै रातिको खाना सधैं खाइसक्नुपर्छ ।
– राति ९ बजेसम्म खाना खाइसक्नुपर्छ ।
-खाना खाएपछि ५ मिनेट आमार गर्ने र त्यसपछि कम्तिमा १५-२० मिनेट हिँडडुल गर्नुपर्छ।